211 job offers HR,Training & Recruitment jobs in all regio
We found 211 job offers HR,Training & Recruitment jobs in all regions of Myanmar
Global World Insurance
225 Days, Full time , Insurance / Pensions
•	Assist to Senior to be done daily attendance process •	Coordinate communication with candidates and schedule interviews •	Assist with day to day operations of the HR functions and duties •	Process documentation and prepare reports relating to personnel activities (staffing, recruitment, training, grievances, performance evaluations etc) •	Coordinate HR projects (meetings, training, surveys etc) and take minutes •	Deal with employee requests regarding human resources issues, rules, and regulations •	Answering employee quest ...
227 Days, Full time , Beauty / Cosmetics
Senior HR & Admin Executive (RG Logistics)
227 Days, Full time , Construction / Building
•	Assist in talent acquisition and recruitment processes •	Conduct employee onboarding and help plan training & development •	Assist to design and expand training and development programs based on the needs of the organization and the individual •	Provide support to employees in various HR and Admin related topics •	Promote HR programs to create an efficient and conflict-free workplace •	Maintainaproper and user friendly filling and document control system for recording and tracking of all documents. •	Monitor office s ...
National Infrastructure Holdings Co., Ltd. (NIHC) is one of the largest infrastructure company in Myanmar. Established in 2015, NIHC has invested inarange of infrastructure projects such as highways, energy, power, logistics, dry port, construction, mining, and agribusiness. Headquartered in Yangon with office locations in Naypyitaw, Mandalay, Lashio, Kyaukme, Muse, and Pathein, NIHC has 14 subsidiaries with over 4,000 employees across Myanmar. In everything we do, we strive to makeapositive impact in Myanmar by developing our country’s infrastructure. Join us to make yours! Some of our landmark projects include 1. Oriental Highway: 1,041 km of highways across Myanmar, making us the largest private road investor and operator 2. Regency Material Trading: 52 petrol kiosk stations withacomprehensive distribution network 3. PowerGen Kyaukse: 145.49 MW gas fired power plant project in Kyaukse 4. RG Logistics: Myanmar’s first dry ports in Ywarthargyi (40 acres) and Myitnge (35 acrse) 5. RG Express Services: Licensed express delivery service operator withacoverage of over 300 cities 6. DIL: 50 acres inland container depot at Dagon Seikkan township 7. RG Construction: Construction contractor for major projects such as Shangri-L Residence and Sule Square 8. RG Global: Developer of Paragon Residence,aluxury apartment residence on Ahlone Road 9. Regency SPC: JV with Singapore Petroleum Company to operate fuel terminal in Thilawa 10. JV with Wilmar International to operate agribusiness jetty and distribute Meizan goods
229 Days, Full time , Export / Import / Trading
233 Days, Full time , Export / Import / Trading
234 Days, Full time , Trading
• Establish HR plans. • Specialized training in related HR functions.
ခိုင်မာ၍အဓွန့်ရှည်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုအတွက် ကျွမ်းကျင် အရည်အချင်းများနှင့်ပြည့်ဝသောနေရာ အနှံ့အပြားမှ လုပ်သားအင်းအားစုများကို ထိရောက်ထက်မြက်သည့် စုပေါင်းစွမ်းအားသစ်တစ်ရပ်အဖြစ် ခိုင်မာစွာစုစည်းကာ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ယုံကြည်ကိုးစားနိုင်သော ထုတ်ကုန်များဖြင့် အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်ရာတွင် ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် ကျရာ အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။အရှည်တည်တံ့မှုသည် အခြေခံဖောင်ဒေးရှင်း သိပ်သည်းကျစ်လျစ်မှုအပေါ်တွင် လုးံဝမှီတည်စေရန်။
.“Naing-Naing Trading” ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုသည် စက်ရုံများ၊ သိုလှောင်ရုံများနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦး အမျိူးမျိုးတို့ဖြင့် အ်ိမ်ဆောက်သံထည်ပစ္စည်း၊ အိမ်မိုးသွပ်ပြား၊ ဘိလပ်မြေစသည့် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိ ဈေးကွက်များသို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွင်း အောင်မြင်စွာထုတ်လုပ်တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးပေးလျက် ရှိပါသည်။ တို့ပြင် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ကုမ္ပဏီများနှင့်လည်း ခိုင်မာသော ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးဖြင့် ယုံကြည်အားကိုါ်ရသော မိတ်ဖက်များအဖြစ်လက်တွဲလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။
“Naing-Naing Trading” ကုမ္ပဏီလိမိတတ်သည်စတင်ထူထောင်သည့် ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစတင်၍ အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာနှင့် တည်ထောင်သူ ဦးမျိုးမြင့်၏ ဦးဆောင်ညွန်ကြားမှုအောက်တွင် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သောနယ်ပယ်အရပ်ရပ်တွင် အများလေးစား အသိအမှတ်ပြု လုပ်ငန်းစုကြီးအဖြစ် စဉ်ဆက်မပြတ် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါသည်။
လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုးံပစ္စည်းများ၏ အသက်အသွေးကြောဖြစ်သော အရည်အသွေး အထူးမြင့်မားခြင်း၊ လုံခြုံရေး အစီအမံများထားရှိခြင်းနှင့် လိုအပ်သောစံနှုန်းများကို ပြည့်မီစွာထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် မှာယူသုးံစွဲသူများက “Naing-Naing Trading” ၏ ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများကို အားကိုးယုံကြည်စွာဖြင့် သုးံစွဲလျက်ရှိပါသည်။
240 Days, Full time , Manufacturing
•	Daily orientation program to new staffs •	Research, develop and design training to meet organization's needs •	Schedule the training calendar and analysis report to department head •	Arrange and prepare training materials •	Collaborate HR Department Project
241 Days, Full time , FMCG